Como Saber Quem Deixou De Me Seguir, Kuziva Sei Akamira Kunditevera Pa Instagram
como saber quem deixou de me seguir
Kuziva sei akamira kunditevera pa instagram
Muchinyorwa chanhasi uchaonaKuziva sei akamira kunditevera pa instagram, mugwara redu rakazara.
Você está assistindo: Como saber quem deixou de me seguir
Instagram inokuzivisa iwe pese paunenge uine mutsva mutsva, asi kwete chero nguva munhu anokutevedzera akamira. Pamwe, kana uine mazana kana zviuru, iwe hauna basa kuti ndiani anokuteera uye ndiani asingakutevere, ndivanaani vateveri vakarasika pasocial network.
Asi kana iwe uchida kuziva uye ukaona kuti vateveri vako vadzikira mumazuva mashoma apfuura, unogona kutarisa. Iwe unogona kuziva kuti ndiani akamira kukutevera pa Instagram, kunyange zvisiri nguva dzose muapp yepamutemo.
Sezvatiri kutaura, Instagram haikurayire kana iwe warega kukutevera kana vanhu vakarega kukutevera, asi kune maapplication ayo anokubatsira kuti uvawane kana iwe uchida kuziva kana kana iwe uchida kubvunza kwavari nekuda kwezvikonzero zvebasa. Chero zvazvingaitika, isu tinokupa iwe mamwe makiyi ekuti udaro.
Sei zvakakosha kuziva kana vakarega kukutevera? Kana iwe ukaedza kuishandisa zvinehunyanzvi, ongorora kuti nei zvirimo zvisingashande kana nei usingakwanise kuchengeta vateveri vauinazvo.
Mazhinji maturusi anoita kuti iwe uzive kuti ndiani akamira kukutevera pane Instagram maapplication ayo anowanzoenderana neApple kana iOS, asi izvo zvaunofanira kuisa pafoni yako, kupa mvumo uye kuona iyo rondedzero.
Veja Kuziva sei akamira kunditevera pa instagram;
Justunfollow yaive imwe yenzvimbo dzakanakisa uye dzakakurumbira masosi ekugadzirisa masocial rede uye ikozvino yakapihwa zita rekuti Crowdfireapp. Iyo yakazara zvakanyanya kuzara kupfuura hunyanzvi maapplication uye inokutendera iwe kwete chete kubata Instagram, asi zvakaremamwe masocial network.
Mushure mekunyora nezita rako rekushandisa uye password (kana kugadzira account neemail yako), anokumbira mvumo kune akasiyana profiles aunoda kubata. Kubva pano iwe unogona kuona inguva dzakanakisa dzekutumira, kuongororwa kwevateveri uye vateveri,mapikicha ane zvakawanda zvinofarira kana mamwe makomendi,etc.
Pamusoro pekutaura kuti ndiani akamira kukutevera pa Instagram, saiti ino zvakare inokuzivisa iwe ndiani anomira kukutevera paTwitter kana Tumblr,Ndivanaani vateveri vako(vanhu vanokutevera uye iwe usingaite) kana avo vaunotevera vasina kukutevera.
Iko kuvhiya kuri nyore uye iwe unongoda kunyoresa uye uteedzere nhanho dzinoratidzwa kuti uone kuti ndiani anomira kukutevera pane mapuratifomu matatu anowirirana.
Iyo zvakare ine yakabhadharwa sarudzo iyo inobvumidzabatanidza anosvika gumi kana makumi maviri neshanu profilesuye izvo hazvisanganisi kushambadza, asi zvingave zvakanaka kuyedza iyo yemahara sarudzo kwemazuva akati wandei kusvikira iwe wanyorera kuPremium uye Bhizinesi sarudzo.
Iconsquare inobhadharwa, asi iwe unogonaedza mahara kwemazuva gumi nemana,pasina kuisa kiredhiti kadhi. Iyo ndeimwe yeakakwana kwazvo, anobatsira uye ehunyanzvi sarudzo uye paine chaipo pazvinokanganisa: unogona chete kuona kuti ndiani akamira kukutevera pa Instagram kana uine account yebhizinesi uye woibatanidza kune sevhisi.
Iwe hausi kuzoona vateveri chete, asi kutsvaga,kubudirira, nguva dzakanakisa dzekutsikisa, nhoroondo yekuda, nezvimwe. Iyo ndeimwe yeakakwana kwazvo kana iwe uchida kuzvipira iwe kune pasocial rede nenzira yehunyanzvi.
Kana iwe usingafungi kuisa mapurogiramu, kune zvakawanda zvinokuzivisa iwe vateveri vakarasika, vakawana vateveri, nezvimwe. Uchazivauyo akamira kukutevera pa Instagrampanguva iyoyo.
Namesigue.com ndeye yemahara kunyorera iyo inokutendera iwe kuti uwane vateveri pa Twitter kana Instagram, iwe unogona kuwedzera vashandisi kune chena runyorwa kana kumira kumira avo vasingachakuteverere.
Imwe yeanonyanya kufarirwa maapplication kuti uwane kuti ndiani akamira kukutevera pa Instagramndiye Muteveri Analyzer.Iko hakuna akawanda maapplication ayo "anorarama" google Play, sezvo iwe uchizviona senge zvine njodzi, saka sarudza iyo yaunotora. Mune ino kesi, ine inopfuura 100.000 ongororo uye ongororo, mazhinji espero akanaka.
Inokutendera iwe kuti uone vateveri vachangobva kuwanikwa uye vakarasika, kuzivaNdivanaani vanokufarira zvakanyanya, Ndivanaani vanonyanya kutaurwa nezvako uye, kazhinji, vanoita ongororo yeaccount yako mukushandisa kwemifananidzo
Kukundikana kutevera dhayagiramu
Iyo sarudzo yakanaka kwazvo, kunyange iine sarudzo shoma pane vamwe vatakaona pakutanga. Chero zvazvingaitika, inozadzisa iro basa ratakanyorera uye isu tinogona kuonauyo akamira kutiteverapa Instagram.
Following giragram haina nharembozha, saka nzira chete yekuishandisa pane yedu smartphones ndeyokubhurawuza. Iyo ndeimwe yenzira dzinoshandiswa kwazvo dzekuziva kuti ndiani anoramba achitevera, kwete zvirinani nekuti zviri nyore kwazvo kubata.
Mira kutevera ku Instagram
Ichi chishandiso chinoshanda nemazvo, asi hachina webhu vhezheni. Iyo kurodha mahara uye ine yakapusa interface inoita kuti ishande 100% kubva panguva yekutanga.
Tinogona kuziva kuti ndiani akamira kutitevera pa Instagram, chengeta akunyoreswa kwevateveri vatsvakuti takakunda, kubva kushamwari dzatinosangana nadzo nedzimwe shamwari dzedu uye tinogona kuziva kuti ndiani ari kutitevera, asi isu hativatevere.
Ver mais: Como Usar O Whatsapp No Pc So Com O Numero Do Celular, Como Usar O Whatsapp No Pc Só Com O Número
Tinogona kusarudza yaro yakabhadharwa vhezheni uko ivo vanowedzera zvinonakidza sarudzo senge yekuteerera kune zvakataurwa uye zvinonaka izvo zvinoita kuti isu mumifananidzo yedu. Asi pane izvo zvatiri kuda kushanda neyemahara vhezheni isu tinopfuura kupfuura kushumirwa zvakanaka.
Como saber quem deixou de me seguir no instagram grátis
Como saber quem deixou de seguir no facebook
Como saber quem é administrador de uma página no facebook
Como saber quem e meu anjo da guarda
Como saber quem é meu guia espiritual
Como saber quem curtiu vc no tinder
Como saber quem curtiu no tinder
Como saber quem curtiu meu video no youtube
Como saber quem compartilhou minha foto no facebook
Como saber quem compartilhou meu vídeo no tiktok